psyop: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Novemba 2019	• 6 Comments
Iya kuthathwa kude kakhulu kuninzi kwaye ivakale ngokungathi ayinangqondo xa ndibona ukuba igama elithi uPhilippe Schol linelinki yokunxibelelana neSchiphol. Jonga igama likaPhilippe Schol. Ngaphantsi kukho igama elithi Schiphol. INeuro Linguistic Programming okanye inkqubo yaphantsi yinto ethile […]
Ukubulawa kabini kukaGina noMarinin ePathé cinema Groningen
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Oktobha 2019	• 24 Comments
Ndothuke nyani. Into enje yenzeka kwi-cinema, indawo apho wonke umntu uhlala khona ukuze abukele imovie. Le yinto emangazayo. ”Le yindlela yokusabela kwekhansile yedolophu uMarjet Woldhuis wenxalenye yebhunga le100% Groningen. Esi ikwangusiphumo sothuselo esifunekayo ukuphumeza umthetho omtsha ukuba […]
I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-3)
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Oktobha 2019	• 10 Comments
Intsapho ye-Ghost, utata wesiporho, unyana wesiporho. Isiporho se-ghost siya kufumaneka kungekudala kwigadi yesiporho, kuba ibali lesiporho kufuneka lihlale limnandi kwaye "liyinyaniso". I-PsyOp yazisa ngamapolisa kaGeorge Orwell kunye nokukwazi ukujonga emva kwecango ngalinye ngaphandle kwewarandi yokukhangela. Ibali libekwa engqondweni yakho yonke imihla nguDe Telegraaf; Iphephandaba elikw '40 /' 45 […]
I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	21 Oktobha 2019	• 10 Comments
Kuyancomeka indlela umatshini wePsyyOp awasebenzise ngayo onke amandla okubeka ndawonye le 'spost' yeyona ntsapho i-Ruinerwold 'yesepha yobomi yokwenene. Isikripthi esihle sefilimu, apho ibhlog kunye neevidiyo zidityaniswe khona. Ngokuqinisekileyo loo nto "yipranoid enobuqhinga", kuba urhulumente akenzi into enjalo noJohn de Mol [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Oktobha 2019	• 8 Comments
Lelinye ibali elinjalo elinokuthi laqengqeleka ngqo kwi-movie script tube kaPeter R. de Vries. Kodwa unemilenze yakhe kwindiza yeTransavia engqingqwa, oko ke akunakwenza nto. I-studio zikaJohn de Mol kunye neTalpa nazo azinalo ulawulo, kuba uJohn […]
Kufakwe kuyo Ukupheliswa Ukupheliswa, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-30 Septemba 2019	• 5 Comments
Ibali le-Greta Thunberg liba licace kwaye licace gca indlela yokuphelisa naluphi na uhlobo lokugxekwa kwisiseko sesizathu, kodwa kwisiseko seemvakalelo zesisu. Kule mpelaveki ndibeke umyalezo kwiphepha lam labucala le-Facebook kwaye ndaxelelwa ukuba ukuthumela kwam kungaphaya kwemida yokuziphatha eyamkelekileyo. Kwaye […]
U-Anja Schaap waseKatwijk ngoLwesihlanu ozayo "wangcwatyelwa" kwisangqa esivaliweyo
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Juni 2019	• 7 Comments
Ndixolisa, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka uxele uhulumeni waseDatshi ukuba awuphelise ngokugqithiseleyo imbambano, nokuba mhlawumbi siyadlala kunye nemisebenzi yengqondo (PsyOps) njenge-Anja Schaap okanye u-Anne Faber. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza kubonakala ngathi usebenziso olungenanto, kuba ucinga ukuba [...]
U-Anja Schaap ufumene efile elwandle ngeenqwelo zaseJamani? Ngaba oko kunokwenzeka ngokwemithetho yemvelo?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Juni 2019	• 5 Comments
Ngokwamaphephandaba ambalwa (ANP nguJohn de Mol, umvelisi weTV), u-Anja Schaap (33) watholakala elwandle ngezolo nge-13: 30 (kwakhona i-33 phakathi). Kwimimiselo yam yangaphambili ndacacisa ukuba u-Anja Schaap ulahleka mhlawumbi ngu-PsyOp (ukusebenza kwengqondo). Ngenxa yokulula, ngaba sicinga ukuba u-Anja Schaap [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	14 Juni 2019	• 6 Comments
Ndandisoloko ndathetha ngeNgxaki, Impendulo, Isixazululo. Kwiminyaka yakutshanje siye sabona amacala amaninzi okubulala kunye namanye amajelo kumaphephandaba apho kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba le yintsebenzo yengqondo (PsyOps) yokudlala kubantu. Ngamanqaku amaninzi ndiye ndachaza indlela [...]
U-Anja Schaap ulahlekile sele ebonakalise i-PsyOp? Bona apha kutheni (ividiyo)
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Juni 2019	• 15 Comments
Ingaba i-Anja Schaap ityala sele libonakaliswe njenge-PsyOp (ukusebenza kwengqondo)? Kwinqaku yam yangaphambili ndithe ndathetha ukuba imeko ye-Anja Schaap ibhekiselele ekuqalisweni kweso sicelo sokusesha esibizwa ngokuthi 'uSherlock'. Ewe, sibona ntoni xa sibona iphepha le-Facebook likaAnja Schaap? Emva koko sibona ukuba uphakathi kwakhe [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.520.638
Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"
UMartin Vrijland op Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"
XanderN op Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"
guppy op Kwimo yamapolisa, ufuna ukuvinjwa kwamapolisa okufota kunye nababoneleli "boncedo"
Ilanga op Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030